Ngwaahịa & Foto
Rubzọ egwu Rubber
Trackszọ egwu egwu
Zọ egwu skid sterị
Ihe mkpuchi Rubber
Kpọchie na ụdị
Chain na ụdị
Ngwongwo roba pụrụ iche
Mozọ egwu Snowmobile
Zọ egwu Robot
Uru nke ndị na-egwu crawler
Isi ọrụ nke "egwu" bụ ịbawanye mpaghara kọntaktị ma belata nrụgide dị na ala, ka o wee nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma na ala dị nro; arụ ọrụ nke “grouser” bụ tumadi dịkwuo esemokwu na kọntaktị elu na ikwado ịrị arụmọrụ. Anyị cr ...
Ọnọdụ dị ugbu a nke igwe eji arụ ọrụ ihe na-arụ ọrụ
Ọnọdụ ọrụ nke ndị na-egwupụta akụ, bulldozers, crawler cranes na ngwaọrụ ndị ọzọ na igwe na-arụ ọrụ siri ike, ọkachasị ndị na-agagharị agagharị na sistemụ ije na-arụ ọrụ kwesịrị iguzogide esemokwu na mmetụta ka ukwuu. Iji mezuo ihe eji arụ ọrụ nke crawler, ọ dị mkpa ...
Kpụrụ nyocha maka ihe nkpuchi ọgwụ
1. Nkpuchi nchekwa ahụike Ọ na-agbaso ụkpụrụ GB19083-2003 "Nchọpụta Nka na ụzụ maka Masks Nchedo Ahụike". Dị mkpa oru egosi na-agụnye ndị na-abụghị mmanu mmanu urughuru filtration arụmọrụ na airflow eguzogide: (1) filtration arụmọrụ: N'okpuru ọnọdụ nke ikuku flo ...
Anyị nọ na BAUMA Shanghai 2018
Anyị ga-aga 2018 afọ na 04/2018
Anyị ga-aga Intermat 2018 （International Exhibition For Construction And Infrastructure） na 04/2018 ， anabata ileta anyị！ Booth Mba：Hall a D 071 ：bọchị 2018.04.23-04.28
Ngwakọta Gburugburu Gator Track